Kutarisa Kutarisa muSan Juan
San Juan haisi guta guru rePuerto Rico. Ndiyo guta guru muCaribbean, metropolis inoshamisika inoumba hupenyu hwepachivako, tsika, hupfumi uye zvematongerwo enyika. Kuongorora guta rino kunogona kuva basa rinotyisa, nokuti rine zvakawanda zvokupa.
Nenzira, kune marwendo akawanda eSan Juan anokuzivisai kune dzimwe nzvimbo dzakanakisisa zvinoonekwa uye zvinonakidza, uye kusangana nekuona nzvimbo nekutenga, kudya, uye kunyange Segwaying (iri iro shoko?).
Kurwendo Rwokufamba Kwekare kuSan Juan
Mune maonero angu akazvininipisa, nzira yakanakisisa yekuona Old San Juan, iyo yakarembera korona jewel yePuerto Rico, iri netsoka. Hapana chinhu chinotora guta rekare zvakangofanana nekufamba pakati pemakona aro akacheka uye mumigwagwa yebhuruu inotungidzirwa yebhuruu (inonzi adoquines ). Guta rekare rinogadzira rwendo ruduku uye rinogona kunge ruchikweretesa zuva rinopisa, asi rinokosha kwazvo.
Kana iwe uchida rwendo rwakakosha rwendo runosanganisira nhoroondo, nhoroondo, uye varaidzo, danai shamwari yangu Debbie ku Legends yePuerto Rico. Its Night Tales of San Juan Rico . Debbie achakutora iwe uye kunze kweimwe yezvivakwa zvekare zveSan Juan zvisikwa usiku, mushure mekunge mapoka evanhu aenda uye chiedza chemwenje chichitsvaga guta rakakomberedzwa murudo uye rwechiedza. Anopawo mazendo masikati, uyewo marwendo akasiyana-siyana kunze kweSan Juan.
Leslie anotaura nezvezvokudya zvePuerto Rican kuCafe El Punto. Mufananidzo © Zain Deane
Pasi uko ne Legends yePuerto Rico pane zvandinoda kutarisa mazita ndezvi Leslie Padró's Flavors of San Juan Tour. Leslie mutungamiri anofadza uyo achakuudza iwe kuPuerto Rican cuisine pamusoro peusiku humwe hwakasiyana. Rwendo rwokufamba runokutora kuburikidza neCall San Juan, nekumira munzira iyo Leslie achapa anecdote inonakidza yezvakaitika kare. Iwewo uchanomira pazvitoro zvitatu kana zvina zvakasiyana, kwaunosvika kuti uenzanise zvimwe zvekunakidza kwakasiyana uko San Juan inokurumbira.
Iyo Nheyo dzataurwa pamusoro pePuerto Rico dzinoisa mararamiro akasiyana-siyana kune imwe nzvimbo yekutakura nemweya yayo yePuerto Rico, iyo inobatanidza rwendo rwezvakaitika kare nechingwa uye rum kudya (pachena, iyi ndeyevanhu vakuru chete.
Kana kufamba mumigwagwa yeChembera yeSan Juan kunoratidzika sekunetseka zvikuru kwauri, ndine mashoko akanaka. Bhuku rekare rehurukuro rakapoteredza guta rekare zuva rose kusvikira manheru masikati, richikutendera kuti uende uye uende pane zvigadziro zvakasarudzwa. Itairi inopa kutakurwa kwakanaka kunotora iwe (kana kuti pedyo) imwe nzvimbo yepamusoro muSan San Juan. Trolley inogadzira makumi mana makumi maviri nemasere uye ine nzira nhatu dzakasiyana, saka haisi iyo inokurumidza kufamba munyika yose, asi iyo nzira iri nyore uye isingadzvinyiriri yekufamba-famba.
Zvisinei, kuti ndive akakwana zvakakwana, ndinofanira kuziva kuti ndiri kunyengera pano. Icho hachisi rwendo, uye hapana mazano ekupa ruzivo pamusoro penzvimbo iyo trolley inoshanyira. Inongova nzira iri nyore yekufamba-famba.
Mufananidzo © Michelle Picon
Kunyange ini ndakanga ndisingazivi pamusoro peizvi kusvikira muverengi akandiudza, asi kuchengetwa kwePoerto Rico zvechokwadi kunoshanya shiriwatching maziso ku Old San Juan! Vanewo "Discovering Nature mu Old San Juan" iyo inokuendesa kune zvakatipoteredza kunze kwemafambisi ekare past uye masangano akare.
Segway Kuratidzwa kweSan Juan
Ndizvo chaizvo ... migwagwa yakasvika ku Old Old Juan. Rwendo urwu ruchakutora kubva kumucheto weguta kusvika kuEl Morro , pamwe nemutungamiri wako achipa chokwadi chezvakaitika kare uye mashoko ari munzira. Uye kana iwe usati wambove paSegway, usanetseka. Mutungamiri wako achakuratidza kuti ungatasva sei nekushandisa imwe, uye zvinoshamisa kuti zvinonzwisisika kutora.
Iwe une zvingasarudzwa zviviri zveSegway yako yekutarisa: iyo yakazara kwemaawa maviri, iyo inowedzera masero makumi mana, kana rwendo rwemaminitsi makumi mashanu nemakumi mashanu rwunosanganisira zvigumi 14.
Kutengesa Kutengesa kweSan Juan
Tsvagurwa ndeyekushanyira San Juan apo unobatanidza zvinonakidza zvekutengesa nekudya. Vanopa maVIP shopper uyewo mafurati kuBaroneta kana Canóvanas Outlet Malls. Ari munzira, iwe unogona kutendera mutungamiri wako kukuratidza kuti ungadya kupi kunotyisa kuPuerto Rican kana kuti bar-hop pakati pezvitoro.
Pakupedzisira, nokuda kwezviitiko-iwe-iwe pachako, chengetedza podcasts idzi dzinogona kukonzerwa dzinoisa rwendo rwekuona nzvimbo yeChembera San Juan muchanza cheruoko rwako. Ingobata pikicha uye rega smartphone yako ive yako mutungamiri.
Kugamuchirwa kuna Juana Diaz, Musha weMadzimambo matatu
Pamusoro 6 Zviitiko zvegore negore muPuerto Rico muna July
Lechón - Chakuda Kudiwa KuPuerto Rico
Kuisa Bets kuHotel Casino Hotels muSan Juan
Nzira Yokupemberera Purogiramu yekuonga yePuerto Rican
Zvinhu Zvokuita muSantiago de Compostela
Positano Travel Guide uye Nzvimbo dzekuvakirwa
2018 Polar Plunges muRondon uye Virginia
Mutungamiri Wako Wokushanyira Petticoat Lane Market
Nzira Yokuwana Sei Visa pakusvika kweIndia
Chokoti Chokufambira Icho Chinofadza Indulgence yeCaribbean Visitors
Zvingaitwa MuMilwaukee Thanksgiving Weekend
WIMCO: Luxury Villas muSt. Barths, Mexico, Europe, & More
Kurudyi Pachitsuwa: California's Best Beachfront Hotels
A Weekend muSaigon